ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီးတရားပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ Oct 21, 22, 23 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီးတရားပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ Oct 21, 22, 23
ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီးတရားပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ Oct 21, 22, 23
Posted by kai on Oct 19, 2011 in Buddhism, Events/Fundraise |2comments
ပါချုပ် ဆရာတော် ကြီး ဒေါက်တာနန္ဒမာလ ဘိဝံသကို ဓမ္မဒေါင်းလုပ်မိသားစုများမှ စင်္ကာပူသို့ တရားဟောကြွရောက်ရန် ပင့်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဆရာတော်ကြီး၏ တရားပွဲများကို အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်ပါမည်။
(ဆရာတော်ကြီး၏ တရားစာအုပ်နှင့် တရားအခွေများကို တနေ့ တမျိုး ဝေငှပါမည်။)
နေ့ရက်။ ၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁ စနေနေ့
အချိန်။ ညနေ ၆နာရီမှ ၈နာရီထိ
နေရာ။ Function Room 1, The ARENA Country Club, 511 Upper Jurong Road, Singapore 638366, near (JooKoon MRT)
နေ့ရက်။ ၂၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁ တနင်္ဂနွေနေ့
နေ့ရက်။ ၂၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁ တနလာင်္နေ့
အချိန်။ ညနေ ရ နာရီမှ ၉နာရီထိ
မှတ်ချက်။ ။ အာဟာရအလှူ ၊ အဖျော်ရည်အလှူ ၊ ဓမ္မပူဇာအလှူများကို ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
ဆရာတော်ကြီးသည် အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက် တွင် Silk-Air MI-517 ဖြင့် ညနေ ၉း၁၅တွင် စင်္ကာပူ Changi Airport Terminal2သို့ ကြွရောက်လာမည်ဖြစ်ပြီး East coast Chalet (Goldkist Beach Resort) 1110 East Coast Parkway , Near Carpark D3 , Singapore 449880 အဆောင် နံပါတ် E-2 တွင် ၄ ရက်တာ သီတင်းသုံး နေထိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Map to Goldkist Beach Resort
Chalet သို့ Bedok mrt interchange မှ bus no. 196.197 နှင့် 16 ပြီး Neptune Court Condo bus gate မှာဆင်းပြီး underpass မှ လျောက်လာနိုင်ပါသည်။
ဆရာတော်ကြီးကိုဆွမ်းကပ်လိုသူများအနေနှင့် Eastcoast chalet သို့ တနင်္ဂနွေနေ့ ဆွမ်းမှလွဲပြီး ကျန်နေ့များကိုလာရောက်ကပ်လှူနိုင်ပါတယ်။ ကြိုတင်ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားေစလိုပါသည်။
အောက်တိုဘာ ၂၅ရက်နေ့တွင် Silk-Air MI-518 ဖြင့် Changi Airport Terminal2မှ နေ့လည် ၂း၂ဝ ရန်ကုန်သို့ ပြန်လည်ကြွရောက်ပါမည်။
ဆက်သွယ်ရန်။ ဦးကျော်လွင်၊ဒေါ်ဆွေဆွေကြိုင်(၉၇၃၆၅၀၃၄)၊ကိုထင်ကျော်(၉၄၂၄၂၉၆၁)၊ ကိုအောင်နိုင် (၉၂၂၇၇၄၉၁)၊ မနီလာအောင် (၉၆၉၉၄၇၉၅)၊ ကိုဇော်ဇော်ထွဋ် (၉၁၈၂၂၉၆၃)၊ ကိုဇော်မိုးစံ (၉၁၇၁၄၃၅၀)၊ မမြင့်မြင့်သန်း(၉၄၂၄၂၇၁၃)၊ မနှင်းနှင်းအေး(၈၂၀၁၃၀၄၃)၊ မကြည်ပြာဝင်း (၉၄၈၉၄၆၂၂)
၁။ SilkAir Tickets ( Business Class ) အသွား နှင့် အပြန် အလှူရှင် US$800 ခန်.
ကိုချမ်း (Mr Pitak Chaiprasit)+ မဖြူဖြူလှိုင် နှင့် သမီး မမေမာလာကျော် (PanPan), သား ကိုလင်းမင်းခန့် (Bond), သမီး မမေသန္တာကျော် (Xiao Xiao)
၂။ ဦးသင်းအောင်+ဒေါ်စန္ဒာဝင်းအောင်၊ သမီး မဝိုင်းဝိုင်းပြည့် နှင့် သား မောင်ထိန်လင်း မိသားစုမှ DVD အချပ်(၁၀၀၀) ပုံနှိပ်ခ နှင့် တရားပွဲအထွေထွေစရိတ်များအတွက် အလှူငွေ ( S$1,000) နှင့် ဆရာတော်ကြီး၏ တရားစာအုပ် အရေအတွက်(၁၀၀၀)
၃။ ဦးသန်းဆွေ+ဒေါ်သင်းသင်းလှိုင် နှင့် သားကြီးကျော်မျိုးဆွေ မှ တရားပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး အတွက် အလှူငွေ US$300
၄။ မသင်းသင်းအေး S$300
၅။ ဦးစိုးသိန်း+ဒေါ်မြသက်နှင်း- သမီး နှင်းထက်ထက်စိုး၊ သမီး အေးသက်သက်စိုး မိသားစုမှ ဆရာတော် သီတင်းသုံးဆောင် chalet ၄ ရက် စာ S$400 ခန့်
၆။ ဦးမြင့်သိန်း မှ တရားပွဲ ၂ ရက် အတွက် ရေ အလှူ
၇။ ကိုနေလင်း မှ အအေး အလှူ
၈။ ဦးခင်မောင်ထွေး+ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း မှ အအေး အလှူငွေ S$200
၉။ မငြိမ်းငြိမ်းဇော် မှ တရားပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး အတွက် အလှူငွေ ှS$160
၁၀။ စေတနာရှင်တစ်စု မှ ဆရာတော် တည်းခိုရာ chalet အဆောင် အတွက် အလှူငွေ S$400 နှင့် တရားပွဲ ခန်းမဆောင် အတွက် အလှူငွေ ှS$100
၁၁။ ဦးစိုးပိုင်+ဒေါ်နီလာဋ္ဌေး နှင့် သမီး ကစ်ကစ် မှ ဆရာတော် တည်းခိုရာ chalet အဆောင် အတွက် အလှူငွေ S$200
၁၂။ ဦးသန်းမြင့်ဦး + ဒေါ်ချိုချိုမာအောင် မိသားစု – အလှူငွေ S$100
၁၃။ မသီတာသိန်း – အလှူငွေ S$100
၁၄။ ကိုတင်မောင်ဌေး + မနေခြည်ချစ်ဝင်းမောင် – အလှူငွေ S$100
၁၅။ Ma Khin Hnin Hnin Lae – အလှူငွေ S$100
၁၆။ ဦးတင်မောင်ဝင်း+ဒေါ်သန်းသန်းဌေး မိသားစု ဒေါ်လာ၁၀ဝ တရားပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး ကုသိုလ်အလှူ
အဂ္ဂမဟာဂန ္တဝါစက ပဏ္ဍိတ၊
– (၁၃၀၁) ခုနှစ်၊တပေါင်းလပြည့်၊ (၁၉၄၀)ခုနှစ်၊မတ်လ(၂၂)ရက်နေ့တွင် မန ္တလေးတိုင်း၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ညောင်ပင်ရွာ နေ ခမည်းတော် ဦးစံလှ+မယ်တော် ဒေါ်ခင်တို့မှ ဖွားမြင်သည်။
– (၁၃၁၇)ခုနှစ်၊ (၁၉၅၆)အသက်(၁၆)နှစ်တွင် အစိုးရဓမ္မာစရိယတန်းကို ဂုဏ်ထူးကျမ်း(၂)ကျမ်းနှင့်အတူေအာင်မြင်၍ သာသနဓဇသိရီပဝရဓမ္မာစရိယဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
– (၁၃၂၁)ခုနှစ်၊(၁၉၆၀)ပြည့်နှစ်တွင် နဝမရွှေကျင်သာသနာပိုင် စံကင်းဆရာတော်ဘုရာကြီးကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြု၍ ရဟန်းဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ နောင်တော်ရင်းဖြစ်သော ဘဒ္ဒ န ္တနာရဒ ထံတွင် သဒ္ဒါ။ သင်္ဂဟဓပိဋက အခြေခံများ၊ ပထမပြန်စာမေးပွဲဆိုင်ရာ ကျမ်းစားများသင်ယူခဲ့ပြီး၊ ဇယမေဓနီ ၊ ဝါဆိုကျောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒ န္တ အဂ္ဃိယ (ရွှေကျင်သာသနာပိုင်၊ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု) ထံဓမ္မာစရိယတန်းဆိုင်ရာ ကျမ်းစားများကို သင်ယူခဲ့သည်။ စစ်ကိုင်းမြို့ မဟာသုဗောဓာရုံ တိုက်ရှိ နောင်တော်များဖြစ်ကြသည့် နာယက၊ တိုက်အုပ်၊ တိုက်ကြပ်ဆရာတော်များထံတွင် သကျသီဟ၊ စေတိယင်္ဂဏတန်းဆိုင်ရာ ကျမ်းစာများကိုသင်ယူခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့ ဇမ္ဗူဒီပကျောင်းဆောင်တွင် တိပိဋကပါဠိ+မြန်မာအဘိဓာန်ကျမ်းြပုအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေစဉ် ချမ်းမြေ့ရိပ်သာဆရာတော် ဘဒ္ဒ န္တ ဇနကာဘိဝံသထံတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို စတင်သင်ယူခဲ့သည်။
– (၁၃၃၉)ခုနှစ်၊ (၁၉၈၀) မှအစပြု၍ သာသနာရေးဆောင်ရွက်ချက်များ-ပထမအကြိမ်သံဃအဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်အတွက် စစ်ကိုင်းမြို့နယ် သံဃနာယကအဖွဲ့ (ရွှေကျင်) အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်လည်းကောင်း ၊ဓမ္မယစရိယစာမေးပွဲ အကျိုးဆောင် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော် ဗဟိုသံဃဝန်ဆောင် (ရွှေကျင်) အဖြစ်လည်းကောင်း ၊ ပထမပြန်စာမေးပွဲပြဋ္ဌာန်းကျမ်းစာ ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ နိကာယ်စာမေးပွဲစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းရေးဆွဲရေး အဖွဲ့ဝင်၊နိုင်ငံတော်သီးခြား ဝိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့အမှတ်(၁/၉၈) ၏ ဝိနည်းဓိုရ် ၊ပထမပြန်စာမေးပွဲကျင်းပရေး အဖွဲ့(စစ်ကိုင်း)၏ ပုစ္ဆကအဖွဲ့ ဥက္ကဌ အဖြစ်လည်းကောင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
– (၁၃၄၇)ခုနှစ်၊ (၁၉၈၆) အိနိ္ဒယနိုင်ငံ၊ အာသံပြည်နယ်နှင့် အရုဏ ချယ်ပရာဒေ့ရှ်မှ ရဟန်း၊ သာမဏေ၊ ကျောင်းသားငယ်များ အားမြန်မာစာနှင့် အဘိဓမ္မာ တို့ကိုပို့ချပေးခဲ့သည်။
– (၁၃၅၅)ခုနှစ်၊ (၁၉၉၄) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊မေရိလင်းြပည်နယ်၊ဘိလ်ဗားစပရင်းမြို့ ၊မင်္ဂလာရာမကျောင်းတိုက်တွင် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အား အဘိဓမ္မာဘာသာရပ်ကိုပို့ချပေးခဲသည်။
– (၁၃၅၇)ခုနှစ်၊ (၁၉၉၆) နိုင်ငံတော်မှ “ အဂ္ဂမဟာဂန္တဝါစကပဏ္ဍိတ” ဘွဲ့ကိုဆက်ကပ်ခဲ့သည်။ သီတဂူ ကမာ္ဘ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် တွင် ပါမောက္ခအဖြစ် ဆောင်ရွက်ကာ Department of Language Studies တွင် English Diploma Class နှင့် B.A တန်းများရှိ ဘာသာရပ်များကို လည်းကောင်း၊ အမေရိက၊ကိုရီးယား၊မက္ကဆီကို၊ဂျာမဏီ၊ပြင်သစ် စသောနိုင်ငံများမှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအား ပါဠိဘာသာ၊အဘိဓမ္မာ ဘာသာရပ်များကို လည်းကောင်းသင်ကြားပို့ချပေးခဲ့သည်။
– (၁၃၆၀)ခုနှစ်၊ (၁၉၉၉) ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်၏ ဩဝါဒစရိယ ဧည့်ပါမောက္ခအဖြစ် ပြည်တွင်းပြည်ပကျောင်းသားများအား စာပေပို့ချပေးခဲ့သည်။
– (၁၃၆၁)ခုနှစ်၊ (၂၀၀၀) နိုင်ငံတော်မှ “အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ” ဘွဲ့ကိုဆက်ကပ်ခဲ့သည်။
– (၁၃၆၄)ခုနှစ်၊ (၂၀၀၃) အိနိ္ဒယနိုင်ငံ၊ မဂဓတက္ကသိုလ်မှ Ph.D ဒေါက်တာဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။ ထိုနှစ်မှစတင်၍ ဂျာမဏီ၊ နယ်သာလန်၊ဩစတြီးယား၊အင်္ဂလန်၊ စင်္ကာပူ၊မလေးရှား၊ကိုးရီးယား နိုင်ငံများသို့ နှစ်စဉ်မပျက်ကြွရောက်၍ အဆိုပါနိုင်ငံသားများအား အဘိဓမ္မာသင်တန်းများ သင်ကြားပို့ချပေလျက်ရှိသည်။
– ယခုအခါ ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန ္တနန္ဒမာလာဘိဝံသ သည်စစ်ကိုင်းမြို့ မဟာသုဗောဓာရုံစာသင်တိုက် ၏ပဓာနနာယကဆရာတော် တာဝန်၊ သီတဂူ ကမာ္ဘ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် တွင် ပါမောက္ခချုပ်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရင်း Diploma သင်တန်းများနှင့် B.A ပ၊ဒု၊တတိယ နှစ်များတွင် စာပေပို့ချပေးတော်မူခြင်း၊ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်၏ ပါမောက္ခချုပ်၊အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဘိဓမ္မာမဟာသိပ္ပံ ပါမောက္ခချုပ် အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း လူသားများအကျိုးအတွက် တရားဓမ္မများဟောပြောခြင်းဖြင့် သာသနာပြုလျက်ရှိသည်။
ဆရာတော်ကြီး၏ ထေရုပတ္တိ နဲ့တရားများကိုခုလိုညွှန်ပြပေးတဲ့အတွက်